Waqtiga isbedelka weyn iyo wareegga weyn: saxeex cabashada: Martin Vrijland
Dhibaatada Corona waxay nagu qasbeysaa inaan ka fikirno isbedelo ba'an. Horaan u shaaciyey ka dib markii mareegteydu ay ku dhacday weerar DDoS nus maalin badhkeed. Waxaan sameeyay bayaan qosol leh anigoo leh: "Qorshaheygu waa inaan soo bandhigo qorshayaal la taaban karo mustaqbalka dhow si aan u wiiqno una baabi'iyo dowladdan iyo nidaamka oo dhan."
Waxaan ka shaqeynaayay qorshahaas waqti dheer waxaana u soo bandhigay dad badan oo ka dambeeyay muuqaallada. Waa qorshe ku saabsan dimuqraadiyadda tooska ah, iyada oo loo marayo nidaamka codaynta qadka ah ee internetka oo lagu aaminay tikniyoolajiyada blockchain.
Haa, waxaa jira khataro ku imaan kara tikniyoolajiyadda, laakiin qatarta ugu weyni waxay kujirtaa pyramid awood. Nidaamkaas wuxuu ubaahanyahay in ladhameeyo oo laga jeesto. Tani waxay suurtagal noqon kartaa oo keliya haddii si caqli leh loo abaabulo. Awooddu waa inaysan aadi udub dhexaadka, laakiin awoodda waa inay u tagtaa dadka.
Waxaan u sameyn doonnaa si ka duwan sidii hore!
Gebi ahaanba waa ka duwan yahay! Caawinaaddaada ayaa loo baahan yahay. Dhowr su'aalood marka hore:
Ma rabtaa in adiga ama carruurtaadu aad ku noolaataan xabsi dijital ah?
Miyaad rabtaa in adiga iyo carruurtaada lagu qasbo tallaal aadan aqoon waxa ku jira oo aan ka ahayn waxa “khubaradu” kuu sheegeen?
Miyaad dooneysaa in lagu riixo nidaam wadaag ah oo dowladeed ku tiirsan kaas oo wax walba lagu kormeerayo iyada oo loo marayo Big Data?
Maya? Hadda waa waqtigii dib loogula noqon lahaa nidaamka sidii aan ognahay! Waqti loogu talagalay dal xor ah oo leh dimuqraadiyad toos ah: hab cusub oo wada noolaansho. Waqtiga laga takhaluso golaha yar yar ee puppy iyo taaj.
Dimuqraadiyad been ah
Nidaamkii hore wuxuu ku saleysan yahay dimuqraadiyad been ah, halkaas oo dhammaan puppy-yada axsaabta siyaasadeed ay u muuqdaan in loo tababbaray inay u adeegaan taaj oo keliya oo ay dadka u bandhigaan khayaaliga doorashada.
Waxay bixiyaan xulasho ku habboon kooxdaas aragti kasta iyo dhadhan kasta oo bulshada dhexdeeda ah waxayna ka doodaan is afgaranwaa muuqata si loo difaaco isla awoodda iyo ajendaha ka dambeeya masraxa.
Mucaaradka, bidix, midig, xorriyadda, dhammaantood waxay dhaartaan daacadnimada sharafta iyo wadahadalada qallafsan ee warbaahinta, wadahadallada inta lagu jiro doorashooyinka; waxay u joogaan kaliya inay dadka ka dhigaan inay aaminaan in codkooda la maqlay.
Dimuqraadiyadda sidaan ognahay nolosheena oo dhan waa mid fog. Waxaan ku nool nahay wada jir hypnosis, indho la’aan wadareed.
Aaminsan in si ka duwan loo samayn karo
Sababtoo ah waxaan ku nool nahay nidaam bulsheed waqti hore, waxba kama ogi. Waa shuruudeena aannu ku dheggannahay.
Waxaan kaliya ubaahanahay dowlad markaa dimuqraadiyada runti waa qaabka ugufiican. Markii si dhexaad ah loo diyaarsanaado, ayaa heshiisyada isku midka ah ay noqon doonaan kuwa waxtar lehna ”, waxaan u maleyneynaa.
"Markaa qof walbaa wuxuu adeegsadaa isla asphalt, waxaan leenahay gaadiid dadweyne oo wanaagsan, canshuurta si habsami leh ayaa loo habeeyay waxaana ku leenahay nolol wanaagsan dhammaan qeybaha nolosheena."
Qaarna, amiirka ayaa runtii dhar ku xidhan
Dadka qaarkiis runti ma arkaan in amiirku uusan xirnayn dhar. Waxay si adag u rumeysan yihiin nidaamka sida aan u naqaano qaar badanna waa ku tiirsan yihiin waana jecel yihiin gebi ahaanba.
Waxay kaliya tahay waqtiga qalalaasaha corona ay qaar bilaabeen inay arkaan in si tartiib tartiib ah loogu faragaliyay nidaamka shuuciga wadajirka ah. Kuwa kale waxay u arki doonaan tan inay tahay hormarin lama huraan ah; horumar loo sii wadi karo si looga hortago musiibooyinka mustaqbalka loona badbaadiyo deegaanka.
Laakiin taasi miyay u baahan tahay in dad lagu meeleeyo shabakad xakameysa teknolojiyad ama dhibaatooyinka ugu badan ee adduunka waxaa ka dhasha dadka hodanka ah ee xoogga liita ee lacagta ka sameeya dawooyinka, saliidda, wax soo saarka guud iyo wixii la mid ah?
Taajkii, gurigeenna boqornimada
Gurigeenna boqornimada ayaa door wanaagsan ka ciyaaray arrintan. Waxay ku leeyihiin awoodooda iyo maalkooda inta badan soo saarista alaabta ceeriin iyo saliida. Markaa kama hadlayno waxyaabo mugdi ah oo wixii hore soo maray.
Yayse siyaasiyiintuna dhaar ku leeyihiin? Ku 'taajkii'. Waxay ku dhaartaan inay u hoggaansamaan dhisme awood leh oo calaamad u ah dhammaan sharciyada oo cidda garsoorayaasha, saraakiisha, qareennada iyo bilayska ay dhaartaan. Dadku kuma dhaartaan inay daacad u yihiin dadka, laakiin waxay u dhigaan taajka.
Taajkani wuxuu xukumaa “nimcada Ilaah”. Qofna ma muujin karo nimcada Ilaah sidaa darteedna awooddu waa sanka xaydha.
Waa nidaam rumeysan oo qof walba oo bulshada ka tirsan lagu sharraxayo, maxaa yeelay waalidiinta iyo awoowayaasha, qoyska iyo saaxiibbada: Qof walba waxaa lagu haystaa isku been ah sidaas darteedna waxba kama oga.
Waxaan sii wadi karnaa inaan ku halleyno nidaamka sii jira, kaasoo sii kordhaya annaga oo isku halleynna haddii aan isku halleyn karno haddii aan mas'uul iska saarno, annaguna waxaan sidoo kale arrimaha u diyaarin karnaa si wanaagsan. Ma eryi karno dhammaan ilaha farsamada ee aan u isticmaalno hal mar, si kedis ah uma wada noolaan karno la'aan kaabayaasha iyo abaabulka. Si kastaba ha noqotee, waan ka laaban karnaa maamulkiisa iyo qaababka go'aan qaadashada.
Dawladdu waa inay ka koobnaataa wakiillo dhab ah oo dadka dhaarta si daacad ah ugu dhaarata ma aha, laakiin u sarreeya aadanaha. Bini aadamku waa inay go'aan toos ah ka yeeshaan go'aannada. Miyaad rumeysan tahay inaysan taasi suurtagal ahayn, maxaa yeelay dad aad u tiro yar ayaa aqoon yar u leh waxyaabo aad u kala duwan? Taasi waa dood wanaagsan, laakiin waxyaabo badan ayaa u baahan in la fududeeyo.
Haddii dadku aysan dooneynin in korodhka lagu sameeyo, markaa ma jiri doono in miisaan la kordhiyo. Dadku haddii ay u malaynayaan in warbaahinta ay billaabeyso inay u muuqato mid aad u badan oo aad u badan oo dacaayad ah, markaa waa in laga soo jeestaa. Haddii dadku aysan rabin faafreeb, ma jiri doonto faafreebid. Iyo wixii la mid ah, iyo wixii la mid ah.
Dib ugu laabashada qaab dhismeedka awooda
Laakiin wax walbaa waxay ku bilaabmayaan dib u noqoshada dariiqa awooda. Waa inay u socdaan dadka halkii taajkii loo saari lahaa. Waa inay u ordaan nin; aadanaha. Maamulayaasha si toos ah ay dadku u doorteen waa in lagu doortaa cod toos ah waxayna ku dhaartaan inay daacad u yihiin dadka. Sidoo kale dhamaan garsoorayaasha, shaqaalaha rayidka ah, booliska, militariga, qareenada, iwm. Dhammaantood waa inay dhaarta dadka u dhaartaan oo dhammaantood waa lagu afgembi karaa aqlabiyad.
Dimuqraadiyadda tooska ah
Dimuqraadiyadda tooska ah waxaa lagu suurta gelin karaa tikniyoolajiyad. Tikniyoolajiyadda loo yaqaan 'Blockchain technology' waxay hubin kartaa inaad u oggolaato codka dadka inay ku hadlaan si aan naxariis lahayn oo aan sal lahayn. Sow taasi ma aha fikirro waxoogaa yar? Ma jiri karaan taageero taas? Markaad maqashid in Elon Musk uu door bidaayo, miyaad si lama filaan ah dhegaha u furaysaa?
Ka codeynta 'daruurta'
Qof kasta oo raba inuu codeeyo sidaas darteed wuxuu ka qaybqaadan karaa geedi socodka go'aan qaadashada ee la xiriira ansixinta sharciga iyo shuruucda, waxayna leeyihiin taariikh dhicitaan. Codbixinta waxaa lagu sameeyaa kombiyuutarkaaga ama taleefankaaga ku xiran nooc aqoonsi. Marka ugu horeysa, waa inaan dib uga fiirsano dhamaan liiska sharciyada hada jira: 'waa joogi kartaa' ama 'waa inuu tagaa'. Haa, fududeynta iyo fududeynta halkii laga isticmaali lahaa maanta dhogorta adag.
Pro iyo con
Tani waxay sidoo kale macnaheedu tahay inaan ku soo lifaaqno buugaag badan oo fara badan nidaam isbarbar dhiga. Ka dib oo dhan, waa inaan dooneynaa inaan ka takhalusno awooda dadka sida Bill Gates. Isla rogida awooda ayaa sidoo kale ka dhici karta halkaas.
Farsamooyinka waa ay fududahay in la liis gareeyo. Runtii waa inaan hoos u dhigno tikniyoolajiyadda iyo xogta weyn taasina waa sida aan u quudin karno nidaamkaas.
Miyuusan Elon Musk ahayn kan doonaya inuu ku xidho maskaxdayada daruuraha oo uu ku xidho AI. Miyaanay dhicin irdihii loo qoondeeyay ee loo yaqaan 'paten 2020-060606' si maskaxdayada looga dhigo meel ku jirta xannibaadda 'blockchain'? Haa, laakiin waan ku codeyn karnaa taas. Waxaan hoos u dhigi karnaa teknolojiyada waxaanan uga baahanahay soosaarayaasha AI in aysan bixin AI lacag la'aan ah.
Kuwo badan ayaa laga yaabaa inay ku adkaato inay sharci kasta ama go'aan kasta dadka hor dhigaan. Markaa dadku waxay heli lahaayeen shaqo maalin oo dhan go'aannadan oo aakhirka dan kama laha. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale macnaheedu noqon kartaa in agaasimayaasha lagu qiimeeyo ama loo xukumo fududaanta iyo xumaanta halkii laga isticmaali lahaa isgaarsiinta dhogorta ah ee aan hadda ka baranay. Marka waa inay keenaan shaqo sahlan oo waadix ah sidaa darteed waxaan u baahanahay noocyo kaladuwan oo darawalada ah.
Wixii u muuqda wax qaldan waa inay runtii horseedaan isbeddel wanaagsan: sharciyeynku wuxuu ka yimaadaa tiro ahaan ilaa tayo.
Faa'iidooyinka ayaa ah in aan ku dhejin karno birta xirida iyo dhex-dhexaadka oo aan uga gudubno adkaanta illaa fudud. Pro kale ayaa ah inaan helno wakiilo dad dhab ah halkii aan ka helli laheyn dad si qarsoodi ah u matalaya lacagta weyn iyo taajkii. Wakiilka dadka waa inuu mar labaad noqdaa waxa macnaha dhabta ah ee erayga uu yahay.
Taasi waa sida aad u sameyso
Waxaan ku bilaabaynaa diidmada nidaamka dastuuriga ah ee aan ku jirno hadda. Wax aan sal lahayn ayaa macnaheedu yahay inay ka horimayso xuquuqda aasaasiga ah ee aadanaha.
Dastuurka waxaa saxeexay taajka, sharciyada waxaa sidoo kale saxiixa taajka. Dhibaatadii Corona, waxaan ku aragnay in dowladuhu inta badan ay diidaan dastuurka isla markaana ay si dhaqso leh u diyaariyaan sharciyo cusub oo ka horyimid dastuurka. Waa inaan ku noqonnaa mabaadii'da saxda ah ee aasaasiga ah halkii aan ku noqon lahayn mabda'a sharciga. Iyada oo ku saleysan xuquuqda aasaasiga ah, qof walba wuxuu leeyahay xuquuq isku mid ah. Taasi waa sababta dimoqraadiyadda tooska ah ay u tahay xalka.
Tallaabada 1 waa sidaas nidaamkii hore ee ku saleysan taajkii oo diidi muuqaalka dimoqraadiyadda. Taas micnaheedu waxaa weeye qaadashada booska ay u maleyneyso in awoodda aan u maleyneyno inay tahay mid aan dastuuri aheyn. Ilaah nimcadiisa ma jiro waana in dadka loo dhaariyaa.
Tan macnaheedu waa inaan diidi karno ciqaabta, xakameynta iyo ciqaabta booska:
“Cidna amar iguma leh sababtoo ah dastuurrada iyo sharciyaduba waxay astaan ​​u yihiin taajka. Taajkani wuxuu ku saleysan yahay nimcada Ilaah. Dhammaan machadyada sida maxkamadaha, mas'uuliyiinta cashuuraha, kormeerka, iwm, waxay ku dhaartaan dhaarta. Dhamaan garsoorayaasha, siyaasiyiinta, ciidanka, booliska iyo wixii la mid ah waxay dhaartaan dhaarta. Awood uma lihin annaga.
Marka tallaabada 1 waa in la diido awood kasta, in la diido ganaaxyada iyo ganaaxyada iyo in la diido waajibaadka canshuurta. Waa inaan iska tuurnaa nidaamkii hore.
Haddaad maxkamadda timaadid, waxaad u tilmaami kartaa garsooraha inuu ku dhaarto aaminka taajkii (nimcadii Eebbe) sidaas darteedna uusan awood kuu lahayn. Waxaad tilmaami kartaa sharciga uu soo saaray taajkii (nimcadii Eebbe). Adigu xor baad u tahay inaad tagto.
Waxaan dhisaynaa nidaam cusub, annaga oo soo saarnay codsi ay saxeexeen dad badan intii suurtagal ah halkan bogga. Codsigaas waxaa loo diraa dowladda jirta iyo taajka waxayna sheegtey inay is casilaan.
Waxaan joojineynaa daawashada telefishanka, dhageysiga warbaahinta iyo siyaasiyiinta, waxaanna garwaaqsan nahay in warbaahinta bulshada ay sidoo kale aalad ku jirto gacanta kuwa caqliga leh.
Waan diidanahay awooda dawlada hoose, dawlada qaran iyo tan Brussels waxaanan ka bilaabaynaa xoq.
Wasaaraduhu way sii jiri karaan oo waxay u baahan yihiin oo keliya inay daabacaan warbixin ku saabsan maareynta maaliyadooda. Hogaamiyaasha wasaaradan waa iney dhaar u noqdaan dadka isla markana ay bilaabaan dib u eegida talaabooyinka xayiraadda iyo sharciyada xadeeya.
Wasaaradda maaliyaddu waa inay tustaa taabashada badhanka waxa ku jira dheriga canshuurta iyo inta deyn ah ee la galay.
Deymahaas waa in la diido oo loo dejiyaa eber. Waxaan isla markiiba u leexanaa bitcoin oo waxaan iska daynaa euro iyo dollar. Awooda iyo saamaynta Bangiga Dhexe ee Yurub iyo bangiyada kaleba waa inay sidoo kale soo baxaan. Lacag meel ayey ka daabacanayeen iyo nidaamka lacagta fiat-ka ayaa ah mid kacsan.
"Deynta qaranku waa in si dhakhso ah loo diido oo loo dejiyaa eber."
Dadka waxaa la siiyaa fursad ay ku furaan koonto bitcoin ah muddo 1 toddobaad ah isla markaana Wasaaradda Maaliyaddu isla markiiba waxay ku shubtaa qof walba xaddiga 1 bitcoin.
Bitcoin waxay bixisaa daboolida. Lacag fiat ah oo dheeraad ah, laakiin lacag cusub oo daboolan, halkaas oo bitcoin ay tahay "heerka dahabiga ah" ee cusub.
Qof kastaa wuxuu helaa dakhli aasaasiga ah. Tani waxay la mid tahay nidaamka shuuciyadda oo ay hadda u shaqeeyaan dowlado, laakiin maxaa yeelay xariiqda awoodda ayaa ku socota dadka isla markaana dimuqraadiyad toos ah ayaa la dejiyey, halista dowladda wadajirka ah ayaa la yareynayaa.
Ganacsadeyaasha iyo shirkadaha waxaa la siiyaa bil inay ku soo xidhaan nidaam u oggolaanaya bixinta bitcoin, laakiin isla markaaba aqbalo macaamil xawaaraha tooska ah ee habka lacag bixinta.
Waaxda Arrimaha Gudaha waxaa la siiyaa 1 bilood oo ay ku aasaaso nidaamka codaynta tooska ah ee loo yaqaan 'blockchain system co cod', kaasoo u oggolaanaya dadweynaha inay u soo gudbiyaan sharciga dadka diidmada ama dib u eegista.
DigiD waxaa loo adeegsan karaa codeynta, laakiin si dheellitiran oo dheeri ah iyada oo loo marayo aqoonsi wajiga ama shahaadada tallaalka dijitaalka ah ayaa ay shacabku oggolaan karaan oo keliya.
Dhamaan shuruucda jira waa isla markiiba lama huraan. Waxaan rabnaa inaan galno wajiga waqti bixida. Howl wadeenada, garsoorayaasha, ciidamada, booliska iyo garsoorka ayaa si dhaqso leh u joojiya howlahooda.
Wasaaradda Arimaha Gudaha waa inay sidoo kale soo bandhigtaa nidaamka codaynta 'blockchain system' muddo bil gudaheed ah, oo ay dadku si dhakhso leh ugu soo magacaabi karaan wakiillo iyaga u gaar ah.
Waxaa jiri doona 1 wakiil wakiilo la doorto wasaarad waliba wakiilka la doorto waxaa lagu dooranayaa codadka badankood habka codechaynta.
Hoggaamiyahan cusub waa inay si dhakhso leh u bilaabaan oo ay usbuuciiba dadka wargeliyaan iyaga oo adeegsanaya xiriir toos ah oo ku saabsan YouTube ama warbaahinta kale ee bulshada.
Markiiba waxay si guud uga baaraandegaan tirada sharciyada waxayna hubiyaan in shaandhada hadda jirta iyo tirada sharciga la kala diro laguna soo koobo tiro ugu badnaan konton wasaaradkiiba.
Xeerarka cusub ee aasaasiga ah waxaa loo soo bandhigay dadka sidii 'xeerar cusub oo bulshada ah' iyada oo loo marayo qaanuun iyo soo koobitaan 1000 erey ah.
Dadku way ogolaan karaan, diidi karaan ama soo celin karaan 'sharciyada bulshada' iyada oo loo sii marayo nidaamka codaynta ee loo yaqaan 'blockchain code system' si dib loogu eego.
Saxaafaddu waa inay si dhakhso leh u joojiso baahinta wararka iyo barnaamijyada doodaha. Waa inuu jiraa waqti dhan oo warbaahinta ah oo laga maqnaado ilaa inta dadka cusub ee matalaya ay dib u fiirinayaan nidaamka oo dhan.
Sidaa darteed waa inay si dhow ula socdaan nidaamka warbaahinta oo dhan iyo joornaalada oo dhan, sidoo kalena ay hubiyaan in dadka loo shaqeeyo halkii ay ka ahaan lahaayeen nidaamkii hore loo dejiyay.
Xiritaanka waajibaadka canshuurta waa ku meel gaar. Waa ganaax. Xagee ka yimaadeen tobanaan kun oo dad ah oo ka yimid dhammaan dadkii loogu talo galay inay ka caawiyaan dadweynaha sidii ay uga bixi lahaayeen dhibaatadda Corona? Lacagtaas meelna laguma daabicin. Nidaamka maaliyadeed oo dhan wuxuu ku saleysan yahay lacag fiat ah (oo aan lagu daboolin wax jir ahaaneed iyo hoos u daabicin).
Dabcan, ujawaabida waajibaadka canshuurta ma aha kama dambeys. Waa ku-meel-gaar, illaa inta wakiillada cusub ee dadka (oo markaa runtii wakiil ka ah dadka) ay ku meeleeyaan wasaaradaha oo nidaamka oo dhan la nadiifin karo oo dib loo dejin karo.
Dhamaadka canshuuraha sidaa darteed ma noqon doono kama dambeys, laakiin nidaamka wuxuu u baahan yahay in laga nadiifiyo bilyannada ku qulqulaya EU iyo dhanka ECB.
Sidee ayaynu u dhaqan gelin karnaa taas? Taasi waxay ku bilaabmaysaa codsi cad oo cad, oo aad naftaada ku sheegi karto inaad rabto inaad beddesho. Waxaan ka hadli karnaa miyir iyo baraarug, laakiin isbedelka kaliya wuxuu ka yimaadaa ficil. Halkan ka aqri qodobbada codsiga ka yimid ka dibna codkaaga dhiib. Kaliya wadajir ayaan u sameyn karnaa isbedel taasna waxay ku bilaabmaysaa dadaalkeena.
Codsigan waxaan ku dhawaaqaynaa:
In taajku uusan awood lahayn
In dowladu si dhakhso ah u guto waajibaadkeeda
In dhammaan sharciyada iyo qawaaniintuba ay noqdaan kuwa isla markiiba shaqeynaya oo dib loo eegay
In fulinta oo dhan si dhakhso leh loo joojiyo
Lacag aruurinta cashuurta ayaa isla markiiba la joojiyay
Ganaaxaasi waa mid aan shaqeyneyn oo uruurinta lacagaha la xannibay
In booliska, garsoorka, militariga, garsoorayaasha, xeer ilaaliyayaasha, kormeerayaasha iyo dhamaan shaqaalaha rayidka ay dhaar ku maamusho dadka.
In deynta qaranku ansax tahay
In sheegashada sumcadda ECB iyo deyn-bixiyeyaasha kaleba aaney shaqeynaynin
In ay jiri doonto dimuqraadiyad toos ah (sida lagu sharaxay halkan)
Codsigan waxaan ku dalbanaynaa:
Joojinta howlaha degdegga ah ee boqorka, boqoradda, xubnaha qolka koowaad iyo labaad iyo xubnaha golaha wasiirada
Horumar toos ah - iyo gaarsiin gudaheeda 1 bilood - oo ah nidaamka codeynta ee loo yaqaan 'blockchain code code' oo ay soo diyaarisay Wasaaradda Maaliyaddu, kaas oo wakiilo cusub lagu dooran karo (hal wakiil wasaarad kasta, in la magacaabo oo loogu codeeyo iyada oo loo marayo nidaamka codeynta blockchain)
In Wasaaradda Maaliyaddu ay ku keydiso 1 xaddiga bitcoin gudaha Netherlands 1 toddobaad gudahood
Maxkamadaynta dadweynaha ee taajka iyo siyaasiyiinta ayaa loo marayaa nidaamka codeynta blockchain, oo ay ku jiraan baaxadda iyo nuxurka xukunka
Markaa u gudub websaydhka cusub hada, saxeex codsi iyo / ama xubin xubin ka noqo:
Golaha Rutte III ee Golaha Dimuqraadiga hadda ma jiro
Patent Microsoft 2020-060606 wuxuu isku xirayaa maskaxda bini aadamka iyo nidaamka bixinta crypto
Tags: blockchain, dhibaatada Corona, taajkii, dimuqraadiyad, toos ah, featured, wasaaradda, wasiirrada, codsi, siyaasadeed, siyaasadda, cod bixin, tiknoolaji, isbedel
12 May 2020 ee 21: 57
Tan waxaan u arkaa inay tahay fikrad ujeedo ujeeddo dhammaad leh in la sii faahfaahiyo, ee aan ahayn wax la isla meel dhigo. Fowdo waa dammaanad qaaday, haddii aad tan sameyso. Jooji canshuuraha? Isla markaaba shaqada laga joojiyo milyan oo shaqaale dawladeed ah, mashaariic fara badan oo boqolaal kun oo dad ah ay ku shaqeynayaan ayaa ku imaan doona istaagid, duulimaad weyn oo duulimaad ayaa bilaaban doona (haddii aysan dunidu oo dhan ka qaybgalin hal mar), iwm.
Isbeddel tallaabo tallaabo ah ayaa sidaas awgeed umuuqda inay u eg tahay inay guuleysato. Waa inaad marka ugu horreysa dhammaystirto bixinta macluumaadka, tusaale ahaan warbaahinta. Haddii dadku ay tahay inay wax walba go’aansadaan, waa inaad hubisaa inay helaan sheeko daacad ah oo ku saabsan wanaagga iyo qasaarooyinka go’aan kasta. Laakiin waxaan si daacad ah uga baqayaa dabiiciga aadanaha, kaasoo aad uga xun dhammaan noocyada isbeddelada, iyo dareenka xasaasiga ah. Sidaa darteed waad iska hubin kartaa in haddii, tusaale ahaan, wado cusub ay tahay in meel laga dhiso, oo ay dadka qaarkiis ka helaan kaamirada horteeda oo ka cabanaya in jidkan u dhow guryahooda, ama meel kayn ah, 90 ka 100 dadku waxay u codayn doonaan KA HOR.
Oo sidaas waxay ku noqon doontaa mashaariic badan, waxaan qabaa. Waxaan ka baqayaa in intaas kadib ay wax badan dhulka ka soo baxaan mar labaad, oo waxaad runtii ku dambayn doontaa nidaam shuuciyadeed oo caadi ah oo la mid noqon doona Midowgii Soofiyeedka, oo lagu kabo teknoolojiyadda horumarsan. Uma maleynayo inay tahay adduunka ugufiican ee lagu noolaado.
Waxaan u malaynayaa, sidaada oo kale, in nidaamka hada jiraa uu waqtigiisii ​​ugu fiicnaa qaatay, isla markaana uu ku wiiqay musuqmaasuq, nacayb iyo dhammaan noocyada kooxaha u ololaynta ee la siiyay awood aad u badan. Qoyska boqortooyada si kasta oo ay tahay waa meel aad u dhacday (in kastoo wmbigu weli u sii jiri karo sidii 'wasaarad' oo ah Nederland-dhiirrigelinta ama -Folklore ama wax, laakiin laga xayuubiyey awoodda oo dhan). Marka waa inay ka duwanaan kartaa, laakiin waxay ku faaftaa 10 ama ilaa sano, oo aan u maleynayo inay dhaqso badan tahay, marka loo eego jahwareerka weyn ee ay tahay inay dhacaan. Qofka, dadku waa inay awood u yeeshaan inay la tacaalaan cilmi nafsi ahaan.
12 May 2020 ee 22: 40
Si loo caddeeyo: Waajibaadka cashuurtu waa ku meel gaadh.
Xagee ka yimaadeen tobanaan kun oo dad ah oo ka yimid dhammaan dadkii loogu talo galay inay ka caawiyaan dadweynaha sidii ay uga bixi lahaayeen dhibaatadda Corona?
Lacagtaas meelna laguma daabicin. Nidaamka maaliyadeed oo dhan wuxuu ku saleysan yahay lacag fiat ah (oo aan lagu daboolin wax jir ahaaneed iyo hoos u dhac la'aan daabacan)
Dabcan, ujawaabida waajibaadka canshuurta ma aha kama dambeys. Taasi waa sababta ay sidoo kale u leedahay 'la joojiyay'. Waa ku-meel-gaar, illaa inta wakiillada cusub ee dadka (oo markaa runtii wakiil ka ah dadka) ay ku meeleeyaan wasaaradaha oo nidaamka oo dhan la nadiifin karo oo dib loo dejin karo.
Dhamaadka waajibka canshuurta ayaa markaa ma noqon doono mid kama dambeys ah, laakiin waa in laga nadiifiyo balaayiin qulqulka qulqulka loo maro EU iyo dhanka ECB.
Ka fikir mar labaad.
12 May 2020 ee 22: 53
Sharraxaad wanaagsan oo ku saabsan lacagta fiat (ciqaabida qosol yar)
12 May 2020 ee 22: 58
Oo tan weli
12 May 2020 ee 23: 06
Iyo in run ahaantii, anigu ma aaminsani isbeddel-tallaabo tallaabo ah Waxay dhammaan noqon kartaa mid adag oo waa in si dhakhso leh loo sameeyaa. Arrin muhiim ah tan ayaa ah in xargaha korantada laga wareejiyo kor iyo hoos. Dadku waa inay lahaadaan hadal toos ah nidaamkuna waa inuu si weyn u buuxsamaa. Fududeynta waa furaha.
13 May 2020 ee 00: 59
Martin, hadaan si sax ah u fahansana waxaad sharaxeysaa qaab isbarbar socda oo wajiga ka joojinaya dastuurka jira "Magaca shacabka". Sidaa darteed tan macnaheedu waa in la soo afjaro boqortooyada dastuuriga ah, oo uu matalayo waxa loogu yeero baarlamaanka "dimoqraadiyadda". Markaa Jamhuuriyad…
Hagaag marwalba waxaan moodayay inay tahay nidaam qalaad oo is khilaafsan. Intii lagu jiray casharadii cilmiga bulshada ee jimicsiga, macallimiintu had iyo goor waxay ku qasbanaadeen inay ka jawaabaan su'aasha fudud "Sidee dimuqraadiyad loo heli karaa haddii mas'uuliyiinta (dawladdu) ku dhaartaan inay daacad u yihiin taajka?" Markaan markaa fiirinayay qolka jiifka .. wax yar baa isbaddelay ixtiraamkaas.
12 May 2020 ee 23: 35
Shirkadaha sidoo kale waa inay kaqeybgalaan kacaanka noocan oo kale ah iyo gaar ahaan qeybta dhaqaalaha. Halkan sidoo kale waxaan ugu laaban karnaa nidaam ay maal-gashadeyaasha iyo milkiilayaashuhu milkiilayaal noqdaan. Codbixinta tusaale ahaan gunnooyinka, siyaasadda mushaarka iyo arrimo kale oo muhiim ah ayaa sidaas lagu samayn karaa iyada oo loo marayo blockchain. Taas ka dib, waaxaha kale waa la beddeli karaa. Mid ka mid ah dhibaatooyinka hadda jira ayaa ah xaqiiqda ah in tiro-badanhuhu ay go'aamiyaan siyaasadda dowladda. Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay in horey loogu xaliyo tallaabada 1.
12 May 2020 ee 23: 54
Xalkaagu waa xalka ugu fiican teknoolojiyadda hadda jirta. Laakiin waxaan si xoog leh u la yaabi karaa haddii xilligan teknolojiyadani sii jiri doono. Waxaan horey u aragnay aragtida koowaad. Caalamku wuxuu hubin doonaa in wax walba dib loo dejiyo. Satlonites-ka Elon wuu joojin doonaa shaqadiisa, internet-ka ayaa hoos u dhici doona, dadku waxay ku noqon doonaan aasaasyada. Egoismku uma sii noolaan doono cabirro aad u sarreeya.
Waxaan durbaba joognaa meel aan ka warqabno xaaladda. Waxaan dhaleeceyneynaa dadka kale laakiin annaga ayaa iska bixinna lacagteena. Dhamaanteen waxaan ku leenahay nidaamyada hawlgalka Microsoft kumbuyuutarradeenna. Dhammaanteen waxaan bixinnaa canshuur maalgeliya Willy, Rutte iyo dagaallo.
Kaliya waa inaan qiranno dambiga oo aan la nimaadnaa xalka sida adiga oo kale oo aan wax u qaban karno waxyaabaha lafteena.
Waad saxantahay, annaga ayay nagu jirtaa. Ujeedada jiritaankeenu waa in aan is baranno nafteena. Ku farax oo u mahadnaq naftaada iyo naftaada oo ha u ogolaato naftaadu inay xakameyso lacagtaada
Haddii aadan is-hubin, qof kale ayaa taas sameyn doona!
14 May 2020 ee 00: 57
runtii waxaa jira dhowr tusaalooyin halka hantida istiraatiijiyadeed ay mar horeba u dooratay nooc analog ah marka lagu daro ama bedelka nooca dijitaalka ah.
13 May 2020 ee 09: 20
Ma caawin karo laakiin waa oggolaadaa
laakiin yaan u qaadanaa annaga.
Si ikhtiyaar ah ugama baxaan iyagoo wata waraaqaha A4 oo ay ka buuxaan codsiyo?
Quruxleyda Crown waa inay marka hore ogaadaan, hoo, haa
haddii kale kacaan uun?
13 May 2020 ee 09: 30
Arrinta xiisaha lihi waxay tahay in dadku jeclaan lahaayeen kacaan, laakiin ma aaminsana inay tahay inaanu kacdoonkeenna laf ahaanteen noqonno.
Tan waad ku adkayn kartaa adoo aasaasaaya qaab dimuqraadi ah oo toos ah. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad adigu is dejiso.
Waan ka cabanaa oo sheegnaa inaysan waxba ka qabanin The Hague. Waxaan ka cabanaa faallooyinka sida: "Aaway xisbiyada mucaaradka!?"
Isbedelka dhabta ah ee kaliya ayaa imaan kara oo waa inuu runtii ku yimaado adoo firfircoon naftaada. Taasoo u noqotay tallaabo aad u fog dad badan.
Waxaan rabnaa inaan akhrino waxa xun ee ku saabsan xirida, ka xun tallaalada iyo waxa xun ee ku saabsan Bill Gates, laakiin firfircoonaanta naftaada si lama filaan ah waa tallaabo aad u fog.
13 May 2020 ee 09: 47
Waa muhiim in la fahmo mabda'a aasaasiga ah ee lacagta sugan. Waxaad haysataa lacag aan la keydin oo daabacan oon xadidneyn oo aan la qarin (sida ay tahay waqtiga qalalaasaha) oo markaa sababa sicir barar (oo sidoo kale loo yaqaan 'fiat money') ama aad leedahay lacag ku xiran heerka, sida dahabka ama saliida. Heerka saliida ee OPEC ayaa tan iyo markii uu dumay, iyadoo qiimaha saliida uu noqday mid aan wanaagsaneyn. Halbeega dahabiga ah ayaa la sii daayay sannado kahor. Bitcoin waxay umuuqataa inay tahay heerka cusub.
Mar labaad waxaa jira qatarta digitization, oo lagu daro AI, laakiin habka loo arko mid aan macquul aheyn in la joojiyo, waad beddeli kartaa Ahraamta awoodda.
Halkan waxaa ku yaal sharaxaad ku saabsan sida “heerka“ dahabka ”ah u shaqeeyo:
13 May 2020 ee 09: 57
"Fiat lacag" ama "lacag aamin ah" waa lacag aan ka helin qiimaheeda shey laga sameeyay (qiimahoodu yahay sida dahabka iyo qalinka), laakiin kalsoonida laga qabo in loo adeegsan karo iibsashada alaabada iyo adeegyada. Sidaa daraadeed qiimaha magacaabista kuma salaysna culeys gaar ah iyo waxa ka kooban birta qaaliga ah, laakiin waxay ku xiran tahay kalsoonida ay ku qabaan hawl wadeenada dhaqaaluhu inay ku dhigaan qiimaha lacagta.
Waqtigan lagu jiro dhibaatada corona, lacagta fiat si dhakhso ah ayey u qiimeynayaan. Taasi waa xaalad aan la qaadan karin.
13 May 2020 ee 11: 29
Waxaa jira is dhexgal toos ah oo u dhexeeya lacagta iyo xoogga. La'aanti millatariga Mareykanka iyo kartida uu u leeyahay go’aaminta dagaalada, doolarku wax badan uma uusan noqon laheyn. Iyo dabcan rabitaanka ciidamada Mareykanka, askarta, si ay u ilaashadaan isku xirnaanta Mareykanka ee doolarka.
13 May 2020 ee 10: 09
Hoosta ka fiiri midigta inta jeer ee la iibiyay dahab, qalin iyo crypto (warqad). Taas macnaheedu waa, tusaale ahaan, 173 qof ayaa sheegta 1 oz oo qalin ah, 172 ayaa iibsaday hawo. Qiimaha cadaaladda ah ee lacagta Mareykanka ah waa $ 2615, qiimaha cadaalad ee doolarku waa 👻
Bass Ruigrok ayaa qoray:
13 May 2020 ee 12: 36
Hanti-wadaagga qaranku wuxuu abuuray nidaam lacageed oo lacag la’aan ah kaas oo joojiyay deyntii dadweynaha oo curyaamisay bangiyadii….
Sidaa darteed incessant been been ku saabsan hantiwadaagga Qaranka Jarmalka.
Bal qiyaas waxa xanaaq noqon doona markay dadku ogaadaan in nidaamka ugu wanaagsan uu burburiyey kuwa loogu yeero dhibbaneyaasha.
Xagga sare iyo ka hooseeya, wanaaggu waa xun yahay, dembiilaha waa dhibbane.
Waxa la mid ah ayay Ghadaffi iyo Saddam Hussein isku dayeen inay sameeyaan ...
13 May 2020 ee 16: 22
Martin xagiisa wanaagsan.
Su'aashu waa, iyo tan ugu muhiimsan, sida aad u helayso booliska iyo millatariga. Waa inaad ku heshaa tan. Waligey ma fahmin sababta aad qof ugu dileyso askar ahaan. Dagaal aanad garaneynin sababta dhabta ah ee dagaalkaas. Amarada ka imanaya iyo kuwa si been ah u sheegaya.
Wali waan ku raaci karaa booliska, laakiin xitaa haddii madaxdaadu kuu sheegto inaad hoos u dhigto banaanbaxyada. Aniga wadan kasta.
Intaa waxaa sii dheer, waxa aan ku fikiray, adiguna waad soo shaac saartay. Jensen oo kaliya ayaa ah lacag la aan. Marka 1 ka mid ah, waxaan u daawadaa madadaalo markii aan wax cunayo. Laakiin ninkaasi runti maahan sheekadiisa. Kaliya iska ilaali dareenka Trump.
Ka dib sheekada Habka Noocuna mar dambe ma ogolaanayo in magaceedu ku bixiyo falcelinta dadka. Iyo inaad ku qorto Jansen ama Jensen halkaas waa 33. Taasi waa hubaal inay dhammaatay, iyo sidoo kale doqonnimo. Jensen ayaa la sheegay inuu horjoogsaday GS. Laakiin tusaale ahaan sii Jensen 33. Oo wuxuu ku qabsadaa dadyowga oo dhan. Sidoo kale fiidiyowga la tirtiray oo leh qiyaastii 180.000 oo aragti ah, aqri lambarka Masonic 9. Dhammaan tilmaamooyinka gacanta lagu qaadayna maahan wax aan jirin. Wiil cabsi badan Etc iwm. Sharp oo dhaqso kaaga muuqda.
16 May 2020 ee 09: 22
waxay ku ridi karaan nimcada Eebbe meel aysan qorraxdu u dhalaalin. Waxay wali masraxa u tahay dadka aan aqoonta lahayn ..
16 May 2020 ee 23: 14
Si la mid ah ayay Boqoraddu u xayirtay baarlamaanka Ingiriiska bishii Agoosto ee 2019, oo ay iibisay warbaahinta sida Boris Johson oo fasax ka codsaday boqoradda. Si kastaba ha noqotee, dastuurka Ingiriiska, Boqortooyada waxay leedahay (awood) waxay leedahay awood ay ilaaliso markii Boqortooyada ay talo siiso golaha gaarka loo leeyahay.
17 May 2020 ee 13: 23
Soo saarida "Xeerka Caadiga ah" ee Maxaabiista (hooyada), boqoradda ayaa ka sarreysa sharciga oo idd ayaa si fudud gacanta ugu haysa Dawlada Dhexe (Kanada, Australia, NZ iwm). Sida Madurodam ay wali tahay boqortooyo dastuuri ah oo leh tiyaatar baarlamaani ah (khudbad ka hadlaysa) masraxa.
16 May 2020 ee 14: 44
18 May 2020 ee 13: 49
Filim qurux badan oo qalbi furan. Halyeeyga caanka ah oo runtii ku dhawaaqaya waxa ku jiray boggan internetka sanado badan. Ku dhawaad ​​macno ahaan, maxaa yeelay waxay mar labaad ku baaqeysaa "awood sare" in la beddelo.
Haweeneydan waxaa laga yaabaa inay leedahay hamiga ugu wanaagsan, laakiin nasiibdarro hadalkeeda shucuurta ah waxba kama bedeli doonto machadka halkaas oo ay ka dhiibtay hadalkaan.
Sida Martin sharraxayo, isbedelka dhabta ahi wuxuu ka yimaadaa gudaha. Haddii hadalka haweeneydan runti ay ka timaado lafteeda, ka dib way ku wanaagsan tahay isu soo sharaxida wasiirnimada nidaamka cusub ee kor lagu sharaxay
« Fiidiyowga Dr. Plandemic Judy Mikovits waa dhacdo dhacdo 201 ah oo ah been abuur wararka been abuur ah (fiidiyo ah)
Hoos u dhaca weyn ee lacagta inta lagu jiro xiisadda corona waxay horseedaa sicir barar: waa xalka bitcoin? »
Wadarta booqashooyinka: 2.473.302